ရက်ပေါင်း ၉၀ တည့်သွားသည်။ အချက်အနည်းငယ် - သင်၏ Brain On Porn
ဖြောင့် 90 ရက်ပေါင်းသို့ သွား. အနည်းငယ်ထောက်ပြ
LINK - ကြိုးပမ်းမှု ၁/၁ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားစိန်ခေါ်မှုအတွက်ရက်ပေါင်း ၉၀/၉၀ ကိုသွားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤအကဒီမှာ Reddit ၏ Gentlefolk,
ငါ့ကိုညွှန်ပြသူများ၊ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဇာတ်လမ်းများပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်အထိငါစင်ကြယ်သောပုန်းရှောင်ရပ်ကွက်၌ရှိ၏, ဒါပေမယ့် ... ကောင်းပြီ, gorramit, သငျသညျကျောက် ppl!
ကျွန်တော့်ကိုထောက်ပြတဲ့အရာအချို့ရှိတယ်။ ရဲရဲရင့်တဲ့ fapstronaut အတွက်သူတို့အသုံးဝင်လိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာထူးခြားတာမဟုတ်ဘူး၊ ဆိုလိုတာကငါတစ်ယောက်ချင်းစီကိုအရင်ပြောခဲ့တာသေချာတယ်။ သူတို့ဟာအလုပ်လုပ်ဘို့ရာပဲ me ဤ အချိန်.
၁) သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။ မကောင်းဘူး တစ်နည်းနည်းနဲ့ကပြောင်းလဲပစ်။ ငါစိန်ခေါ်မှုမစတင်မီလေးမှာတိုက်ခန်းအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
၂။ ကောင်းကင်ဘုံအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေမည့်နည်းလမ်းသစ်ကိုရှာဖွေပါ။ ငါယောဂကျင့်ခဲ့တယ် (ငါဟာကြီးမားတဲ့လည်ပင်းညှစ်ထားတဲ့ရွှံ့နွံကြီး) ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ထာဝရ၌ရှိနေခြင်းထက်ပိုမိုကြည့်ရှုခံစား။ ခံစားရ၏။ Srsly, ဒီတစ်ခုကကြီးမားသည်
၃) ဒီဟာမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေအတွက်လုံး ၀ ကွဲပြားခြားနားသွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘူး။ ဘယ်သူမှမ ငါတစ်ခုခုခန့်မှန်းလျှို့ဝှက်စွာထွက်သွားနေသလိုခံစားရတယ်၊ ဒီတစ်ခါလည်းကရုံဖုံးအုပ် smug သာလွန်ခဲ့သည် ... ဒါပေမယ့် yeah ။ ဒါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ သင်ကလုံးဝကွဲပြားခြားနားစွာတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။
၄။ စနစ်ကိုထိန်းထားတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ခြောက်သွေ့။ ခဲသောကြီးကြီးမားမားရှိသည်။ သူငယ်ချင်းတွေရှိလာတဲ့အခါသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့မေးလိမ့်မယ်၊ ငါ (# ၃ ကြောင့်) က“ ငါလုပ်နေတဲ့ပရောဂျက်အတွက်” လို့ဖြေပြီးဘာသာရပ်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်။
၅။ မင်းပြောတဲ့အတိုင်းထပ်ထည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောဖို့ ၂-၃ မိနစ်ကိုရည်စူးထားပါ။ ငါပြောချင်တာကငါဟာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြောနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီ ၂-၃ မိနစ်လောက်မှာဒီ shit တွေအားလုံးဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်။ သင်ဟာအံ့အားသင့်စရာကောင်းပြီးသင့်ကိုဘယ်လောက်ထိအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်အသားအားလုံးကိုယ်စားပြုပြီးအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဲ့ကြီးမားမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုပြောပြပါ။
၆) သူနော်ဝေလိုဗီဒီယိုခွေမှတ်မိသေးလား - တစ်ကိုယ်တော်အန္တာတိတ်ခရီးစဉ်၏ ၈၉ ရက်တွင်ကောင်လေး? အဆိုပါ cheezy သည်သူ၏အမှိုက်အစားအစာ stash ပြန်လည်ရှာဖွေဘို့မြေပြင်ပေါ်မှာမှုတ်ခြင်းနှင့်အော်ဟစ်ကောင်လေး doodles ။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုအစီအစဉ်ကသူကိုဆိုလိုလို့ပဲ သူထွက်သွားတာကိုမမှတ်မိဘူး။ ဒါကြောင့်သူထွက်သွားတဲ့ဂရုစိုက်မှုတိုင်းအံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, မျှော်လင့်ခြင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်တွေအများကြီးရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ် ကဒ်ပြားများကိုကစားခြင်းတွင်ဆုအသစ်တစ်ခုကိုငါ ၁၀ ရက်တစ်ကြိမ်ပြန်စီခဲ့သည် (သင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မချမ်းသာပါ) ကျွန်တော့်ရဲ့ဆုဟာဘယ်နေရာမှာမဆို rootbeer float ကိုခံစားတာကနေအနှိပ်ခံတာ၊ ရှပ်အင်္ကျီတွေရတာမျိုးအထိပါပဲ။ ၁၀ ရက်တကြိမ်မှာကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းသည်။
၇။ Infinity သည်ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ရင်တောင်မှအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အပိုင်းအစတွေအဖြစ်ခွဲပါ။ အကယ်၍ သင်၏နှလုံးသားကိုဖြုတ်ချနိုင်သည့်နံပါတ် ၈ တွင်သင်၏နှလုံးသားမှသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါကသင်၏စစ်ဆေးမှုကိုအပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ပါ။
8) တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ junk အဖြစ်နည်းနည်းတို့ထိပါ။ Tersely တတ်နိုင်သမျှယေဘုယျတစ်လမ်းအတွက်ရေချိုးခန်းထဲမှာပွတ်တိုက်။
၉။ သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်သင်၏အတွေးများကိုသင့်လျော်စွာပုံဖော်ပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကခင်ဗျားကစတာသာဆိုရင်၊ ၈၊ ၉၊ ၁၅ ရက်ကို da fap မရှိဘဲသွားဖို့ဘယ်လောက်မကြုံစဖူးကိုစဉ်းစားပါ။ သင်ရက် ၅၀ သာရောက်နေလျှင်၊ ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်သန့်ရှင်းသော ၀ ါစာများဟုထင်မှတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာ ၁၁၅/၁၂၀ နေ့ရောက်နေပြီဆိုရင်သင်အခုချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မိုက်မဲမယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာအားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်၌ကဘောင်ဘယ်လိုအကြောင်းပါပဲ။
၁၀။ ငါ့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကနည်းနည်းယုတ္တိမတန်ဘူး။ မင်းတကယ်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တွင်းတစ်တွင်းထဲထိုးသွင်းနိုင်တယ်လို့ငါအလောင်းအစား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး မဟုတ် တစ်ခုခုလုပ်ပါ။ ဘယ်ကိုသင်ဖို့ရှိသည်ဆိုလိုတယ် တကယ်တော့ ထား စွမ်းအင်ကို ပျက်ကွက်သို့။ သင် .. လုပ်ရမည် ကြံစည် ကျရှုံးရန်။ အကယ်၍ သင်သည်စာသားအတိုင်းဘာမျှမလုပ်ပါကအချိန်ကာလတစ်ခုလုံးအတွက်အစာစားပြီး shit ကိုသာစားပါ။ အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ် ပိုလွယ်လိုက်တာ ကျရှုံးခြင်းထက်။
မင်းလုပ်နိုင်တယ်! ယူပါ၊ အခြားစိန့်ခရစ္စပင်း၏နေ့မိန့်ခွန်း Roffoffs!